तपाईलाई कसैले साँचो माया गरेको हो कि झुटो माया गरेको यसरी पत्ता लगाउनुस् | Makalukhabar.com
मंसिर २४ । अहिलेको सूचना र प्रविधीको युगमा यो लभ भन्ने विज्ञान निकै फस्टाएको छ । किनभने अहिले बाबा आमा र आफन्तहरु गर्ने माया त छर्दै छ । तर यहा एक प्रेमी र प्रेमिकाले गर्ने माया कुरा गर्न लागिरहका छौ ।
जहाँ भनिन्छ , मायामा , जातभात ,सानोठुलो हेरिदैन् । यदि परि हालेमा एकले अर्कालाई ज्यान दिन समेत पनि पछि पदैन् । त्यसैले कतिले मायाको जालमा फसेर आत्माहत्या पनि गरेको खबर बेलाबेलमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आउछन् ।
तर अहिलेकाे विकाससगै हरेक कुरामा एक न एक स्वार्थ हुने गर्छ । यदि कुनै केटाले केटीलाई मन पराउछ भने त्यो भित्र पनि शारिरिक अर्कषण या अन्य केही चिज हुनसक्छ । त्यस्तै केटीले पनि केटाको धनसम्पत्ती या केही चिजको स्वार्थले मायाको नाटक गरेको हुनसक्छ । त्यसैले विचार गर्नुस् । कही तपाईको माया पनि झुटो त होइन् । एक चोटी यो सूत्र लगाएर चेक गर्नुस् ।
-पहिलो सूत्र हो , के तपाईंको जीवनसाथीले सधै शारीरिक सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ । त्यसो भए यो मायामा पनि केही स्वार्थ छ भन्ने सोच्नुस् । तर माया शारिरिक सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । तर यो कहिलेकाही हुन्छ । यदि शारिरिक सम्पर्क पछि उसले तपाईलाई ध्यान दिदैन भने यो पनि एक सकेंत हो । मायामा त सबै हुनुपर्छ ।
-दोस्रो सूत्र भनेको तपाई दुवै जना प्रेमीप्रेमी एकअर्कामा शारिरिक रुपमा मात्र नभएर भावनात्मक रुपमा पनि कुरा मिलेन भने यो पनि एक सकेंत हुनसक्छ । किनभने केही समयको आर्कषणले मात्र पनि जीवन चलदैन् । त्यसका लागी एक अर्कामा सधैभरि सामित्यता हुन आवश्यक छ ।
-अर्को तेस्रो कुरा यदि उसले तपाईकोे बाहिरी सुन्दरतालाई मात्रै पनि हेरको छ भने यो पनि झुटो हो । किनभने कतिपय मानिसहरु बाहिरी सुन्दरताको कारण मात्र पनि मन पराउछन् ।यो कुरा पनि केही समयमा नै थाहा हुन्छ ।
-र अन्तिम कुरा भनेको यदि तपाई कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईको पार्टनरले त्यो कुरालाई कस्तो रुपमा लिन्छ । यदि उसले समस्याको समाधान तिर गएमा, थाहा हुन्छ कि यो साचो प्रेम हो । यदि उसले हासोको रुपमा मात्र लिन्छ भन्ने यो पक्का स्वार्थ हो । त्यसैले विचार गर्नुस् । एजेन्सी
यी सुत्र प्रयाेग गरी श्रीमतीलाई सधैँ खुशी बनाउँनुस्
माघ ६। आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित लेखक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरूयी सुत्रहरु अपनाउनु भयो भने तपाइको परिवार... जारी राख्नुहोस...
यसरी एकै पटक धेरै जनालाई एसएमएस पठाउनुस्
माघ २। एकै पटकमा धेरै जनालाई एकै प्रकारको सन्देश अर्थात् एसएमएस पठाउनका लागि बल्क एसएमएस (ulk SMS) को प्रयोग गरिन्छ । यो सेवा विशेष गरी धेरै सदस्य वा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, पर्यटन व्यवसायी, सरकारी, अर्ध सरकारी र गैरसरकारी निकायलगायतक... जारी राख्नुहोस...
बिवाह गर्ने जाेडीमा अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने यी गुणहरू
माघ १। तपाई विवाहित हुनुहुन्छ रु वा विवाह गर्ने सोँचमा हुनुहुन्छ रु त्यसो हो भने तपाईले केहिबेर सोच्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् विवाह हतारमा गरेर फुर्सदमा पछुताउने मामिला होईन । विवाह गरेका जोडीहरु पनि हिजोआज केहि समयमै छुट्टिने गरेका उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ ।विवाहलाई बिहे पनि भनिन्छ । दुई व्यक्ति... जारी राख्नुहोस...
केराको अत्याधिक सेवनले छोरा जन्मने
पुस २९ । पितृ सत्तात्मक देशमा छोराको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ । धेरैले छोराकै चाहानाका कारण पारिवारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् । छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोग... जारी राख्नुहोस...
जाडोमा यसरी बनाएर खानुस् तातो–तातो थुक्पा
पुस २८ । जाडोको समयमा चिसोका कारण धेरै पटक भोक लाग्ने गर्छ । जाडोमा तातो खानेकुरा खानाले जिउ तातो हुन्छ । जाडोमा विभिन्न सब्जीहरूमा पाइने पोषक तत्वले भरिएको थुक्पा खाँदा जाडो भागेर शरीर न्यानो हुनुका साथै यसलाई पकाउने विधि पनि एकदम सजिलो हुन्छ ।बजारमा सजिलै किन्न पाइने विभिन्न सब्जीहरूको प्रयोग गरिए... जारी राख्नुहोस...
गर्भवती महिलाले कफी पिएमा हुन सक्छ गर्भपतन !
पुस २६, काठमाडौं । कफी पिउनाले स्वास्थ्यमा सकारात्मकका साथसाथै नकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।२० हजार जनामा गरिएको उक्त अध्ययनले सही तरिकाबाट कफी पिउने मानिसहरू धेरै बाँच्छन् भनी उल्लेख गरेको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कफीले टाइप टु डायबिटिज‚ कलेजोसम्बधी रोग‚ कोलोरेक्टर क्यान्सर, अल्ज... जारी राख्नुहोस...
अध्ययन भन्छ– ‘महिलाहरू सम्बन्धबाट छुट्टिनुअघि नै विकल्पका रुपमा अर्का पुरुष साथी तयार राख्छन्‘
पुस २६, काठमाडौं । प्रेमी वा श्रीमानसँगको सम्बन्धमा रहेका महिलाहरुले छुट्टिनुअघि नै ‘ब्याकअप’ का रुपमा अर्का पुरुष साथी तयार राख्ने गरेको एक अध्ययमा खुलेको छ । ५० प्रतिशत महिलाहरूले प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि आफ्नो प्रेमीसँग छुट्टिनुअघि नै विकल्पका रुपमा अर्का साथी तयार पार्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाए... जारी राख्नुहोस...
पहिलो पटक डेटिङ जाँदा जान्ने पर्ने यी कुरा
पुस २५, एजेन्सी । तपाई पहिलो पटक डेटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ । यदि त्यसो हो भने तपाईको पहिलो डेटिङमा केहि कुरा जान्ने पर्ने हुन्छ । आफ्नो पहिलो पटकको अनुभवलाई स्मरणीय बनाउने हो भने पनि यो उपाय तपाँईका लागि लाभदायक सिद्ध हुन सक्छ ।साथै तपाँईलाई कुनै पनि सम्बन्ध दिगो र बलियो बनाउने चाहाना छ भने यी उपायहरु... जारी राख्नुहोस...
यी टिप्स अपनाई मज्जाले हिउँ खेलौँ
पुस २३, काठमाडौँ । अहिले चिसो बढेसँगै अहिले देशको बिभिन्न स्थानमा हिउँ पर्नुकाे साथै हिउँ खेल्न जानेहरुको ओईरो लागेको छ । धेरै मानिस यस मौसममा हिउँ खेल्न रुचाउने हुन्छन् । हिउँ खेल्न जाँदा हिउँमा फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने, मानिसको कमी छैन । यस मौसममा हिउँ खेल्न जाँदा धेरैै मानिसहरु बिरामी पनि पर्ने... जारी राख्नुहोस...
जाडाे बढ्याे भनेर हिटर र गिजर चलाउँदै हुनुहुन्छ ज्यानै जान सक्छ है
पुस २२, काठमाडौं । जाडोमा पानी तताउन बाथरुममा राखिएका ग्यास गिजर वा कोठा तताउन प्रयोग गरिने हिटरलगायतले सर्वसाधारण बिरामी पर्ने र ज्यानसमेत जान सक्ने भन्दै विशेषज्ञले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । गिजर प्रयोग गरेर नुहाउँदा गत शनिबार ललितपुरमा एक जनाको र कोठाभित्र कोइला बालेर सुत्दा तीन साताअघि की... जारी राख्नुहोस...